Labsiin yeroo hatattamaa waan hanga ammaatti hin daangofne maal daangessa; Gidiraa Oromoon hin argine kam gadi baasa? - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Labsiin yeroo hatattamaa waan hanga ammaatti hin daangofne maal daangessa; Gidiraa...
Labsiin yeroo hatattamaa waan hanga ammaatti hin daangofne maal daangessa; Gidiraa Oromoon hin argine kam gadi baasa?
Harun Hassen | Labiin kuni miidiyaa walabaa kam nurraa dhaamsa? TV hayyama Woyyaaneetiin qilleensa irra jiru kam qilleensa irraa buusa?
Woyyaanee labsii yeroo hatattamaa kanaan qilleensa sodaa Oromoo keessa gadi lakkisti, qor-sammuu ummataa cabsuudhaaf tattaafatti. Oromoo garuu itti ni milkooftii? Dhugaan jiru, labsii yeroo hatattamaa wanti jedhu kuni dukkanuma Oromoon ganna 25f keessa jiraate, waanuma Sadaasa 2015 kaasee sabni kun jiruu godhateedha. Mrgi kana dura Oromoon qabu amma sarbamu, manni akka haarawatti sakkatta’amu, TV fi miidiyaan nurraa cufamu; wolumaagalatti uggurri nuti hin beekne akka haarawaatti nurra kaayamu tokko hin jiru.
Akka yaadaa fi hawwii Woyyaaneetti labsii yeroo hatatamaa kanaan Oromoo ni jilbiiffata, Agaaziin qa’ee Oromoo hunda keessa akka barbaadetti gugata. Akka labsii kuni ifa taasisutti kana booda mirga ufiitiif bifa kamiinuu dubbachuun, daandii irratti bayanii haqa ufiif mormachuun dhoorgamaadha. Oduun gaarii- mirga kana hunda kana duras hin qabnu waan ta’eef mirgi dhabnu ykn sarbamnu tokko hin jiru. Oromoon mirga ufiif falmachuuf takkaa Woyyaanee irraa mirga fi hayyama hin arganne. Hayyama isiitiin baatii 11 daandii Oromiyaa irra hin dhaabanne. Jibiiffatee jiraachuu dadhabuudha kan daanditti Oromoo baase. Kana gochuun ammoo irbaata Agaazii isa taasise.
Ammas labsii kuni ummanni daandii irraa akka guuramu, manni namootaa Agaaziin akka saamamu ifa godha. Labsii kana keessa raajiin tokko hin jiru! Dhugaan jiru, hanga hundi keenna beeknutti, yeroon Agaaziin ummata karaa irraa guuruuf hayyama mana murtii itti gaafate, mana namaa cabsuudhaaf seera eegee itti tankaarfate tokko hin jiru. Manatti seenanii haadha ijoollee irratti ajjeessu. Daandii irratti ajjeesanii haadha reeffa ilmaa irra teessisu. Labsiin yeroo hatattamaa kanaan kana caalatti bifa kamiin Oromoo salphisu? Kanaa olitti akkamitti nu ajjeesu? Labsiin kuni waan Oromoon hin beeknee fi doorsisaa inni keessa hin dabarre haarawa hin qabu.
Itoophiyaa keessatti, sirna Woyyaanee kana jalatti, daandii irratti bayanii dubbachuu mitii Facebook irratti yaada ufii ibsachuun yakka shororkeessummaatiin nama adabsiisa. Biyyattii keessatti yeroo dheeraa dura kan miidiyaan walabaa taphaan ala taasifame. Si’a heddu OMN, ESAT fi VOA’n uggurame. Miidiyaan Hawaasaa yeroo hunda cufama. Sararri wolqunnamtii hundi danqama; bilbilaan ummanni akka wol hin qunnamne taasifama. Ummanni Oromoo bifa kanaan woggaa hedduuf jiraate. Dararaa heddu dandamate. Labsiin yeroo hatattamaa kuni waan hanga ammaatti hin daangofne maal daangessa? Miidiyaa walabaa ykn hawaasaa kam dhaamsa? TV hayyama Woyyaaneetiin qilleensa irra jiru kam qilleensa irraa buusa? Lubbuun ufkeessatti qabuudhaaf Woyyaaneen dhamaati. Garuu kan irratti bobbaatu Oromoo ta’uu hubattii?
Duumessi labsiin yeroo hatattamaa Woyyaaneen uumte kanaan wanti roobu tokko hin jiru. Woyyaaneen erga fincili Oromoo eegalee rasaasa jalaa gubbaa nutti roobsite; dhiiga dhangalaastee lubbuu qaalii kumaatamaa baaste. Daandii irraa dargaggoo wolitti qabdee mooraa woraanaatti gatte. Sochii ummataa daangessitee bayaa gala ummata dhoorgite. Itti hin milkoofne malee Oromoo jilbiiffachiisuudhaaf humni isiin hin bobbaafne, tooftaan isiin dhimma itti hin baane tokko hin jiru. Hanga ammaatti kasaaraa irraan kasaaraa argataa, guyyaa guyyaatti salphataa; akkasumas sammuu fi tooftaa Oromoo harka ittiin kennachiiftu fixataa dhufte. Kana boodas hin mikooftu. Tooftaa kanaanis Oromoo irra hin aantu. Qabsoo haa finiinsinuu. Hawwii fi eebjuu isii haa jaamsinuu. Daran akka itti dukkanooftu haa goonuu.
Oromoon qabsoo tana injifannoodhaan goolabuuf waaxiqqoon isaaf hafuu hundi qajeelatti hubatuu qaba. Yeroo xumura irra geenna kanatti laaffachuu, abdii kutachuu fi bitaa-mirga midhachuun qabsoo dhiigaan asiin geenne galaafachuudha. Arrsaa barbaachisu kaffalaa, tooftaa fi tarsiimoo nu baasu malaa qabsoo tana handhuura Finfinneen gayuu qabna. Qabsoon itti fufa!
Yaada qabdan barreessaa [email protected] biraan gayaa.
Previous articleMootummoota Gamtoomanitti Komishinarri Falmaa Mirganamoomaa ajjeechaan atattamaan haadhaabatu, yakkamaanis seeraaf haa dhiyaatu jedha
Next articleQabsoon Oromoon geggeesse Woyyaaneen Somaaliyaa gadilakkistee akka baatuuf dhirqamsiise